Kushicilelwe ngu umphathi20-11-13
Le yimboni yethu, etholakala eHuian Chengnan Industrial District, eQuanzhou, idolobha elisogwini eFujian, eChina, elijabulela idumela elithi "Idolobha lezikhwama namacala". Izikhwama zaseHongsheng zazi ...
Kushicilelwe ngu umphathi20-11-12
Lesi yisakhiwo sethu sokukhiqiza, esithatha cishe amamitha-skwele angama-30,000. Isitezi sethu sangaphansi sinabasebenzi abangaphezu kuka-200 abanamakhono, imigqa engu-8 yokukhiqiza, ...
Kushicilelwe ngu umphathi20-11-11
Lo ngumnyango wethu we-IQC onemishini yokuhlola esethi ephelele. IQC (1-2 days) 1. Indwangu test ukushesha kombala, indwangu traction test, isikhwama isibambo kanye ehlombe strap test jerk, isikhwama trolley test. 2. QC ...
Kushicilelwe ngu umphathi20-11-10
Igumbi lethu lombukiso lithatha cishe amamitha-skwele angama-2 000. Ngeminyaka engu-27 yokuhlangenwe nakho kulo mkhakha, manje sesinguchwepheshe kakhulu ekuklameni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izikhwama ezahlukahlukene ...